Sintering & Finishing Vsmile Ngaphambili UT Multilayer-Iindaba-VSmile Co., ltd
Ukucoca kunye nokuGqibezela iVsmile yangaphakathi ye-UT Multilayer
Ixesha: 2021-06-20 I ngxelo:17
I-zirconia enemigangatho emininzi sisisihloko esishushu kwishishini lamazinyo namhlanje. Yeyona nto i-esthetic monolithic material ekhoyo kwaye kulula ukuyenza ngexabiso eliphantsi. Iiklinikhi sele ziqhelile ukumisela abaguli babo ngezinto ezinamandla aphezulu, kwaye i-zirconia enemigangatho emininzi iphumeza ngempumelelo loo nto.
I-Vsmile Anterior UT Multilayer luhlobo lwemveliso entsha kumgca wethu we-zirconia kwaye sonwabile ngoku ukuba ngoku iyafumaneka! Yintoni ekhethekileyo malunga nale zirconia enemigca emininzi oyibuzayo?
Inika izikhombisi ezingaphezulu kunezo unokufikelela kuzo ngeLithium Disilicate kwaye unamandla aphezulu ukuze oogqirha bamazinyo kunganyanzelisi imveliso ekumgangatho asetyenziselwe ukufumana nokubonelela ngayo. I-Zirlux Anterior Multi ye-gradient shading ehambelana ne-incisal, i-dentin, kunye ne-gingiva yentsingiselo yendalo.
Ungaqinisekisa njani ukuba impumelelo yakho yeyokugqibela yeesthetics kunye namandla ekhutshwa yile mveliso nangona? Konke kuza kwinkqubo yokuntywila-elona nyathelo libaluleke kakhulu. Landela la manyathelo alula ali-9 aqinisekisa ukuba iZirlux zangaphambi kokubuyiselwa okuninzi ziqhubekeka ngokuchanekileyo ukuze iphumelele, ugqirha wamazinyo, kwaye ekugqibeleni, ube sisigulana.
Yomisa isithsaba ngokupheleleyo ngaphambi kokuntywila.
Beka ukubuyiselwa kwindawo yokunyibilika yokusika indawo phakathi kweyunithi nganye.
Dwelisa isithando somlilo ngokwemiyalelo yaso yokusetyenziswa ngokwenkqubo yesinter eboniswe kwiphepha elilandelayo.
Sebenzisa umjikelo wokuntywila.
Lindela de kube kugqityiwe ukupholisa ngaphambi kokuba ususe ukubuyiselwa kwesintsi.
Hlola ukubuyiselwa kweziphene ezinje ngeetshipsi, ukuhlala, ukuhlala, ukunxibelelana phakathi, kunye nokuthembeka.
Ukuba kukho imfuneko, yenza uhlengahlengiso oluncinci ngebhokisi yokugaya yedayimani epholileyo ngamanzi usebenzisa isixhobo sokukhawulezisa isiqwenga sokucoca iZirconia, nikela ingqalelo ngelixa upolisha ukunqanda ukusilela kunye nokuphuka komphetho.
Nje ukuba konke ukusila kugqityiwe, coca ukubuyiselwa ngamanzi kwaye umise ngokupheleleyo. Isakhelo ngoku silungele ukuvezwa.
Isithsaba esipheleleyo semigca silungele ukugcoba. Landela imiyalelo yokusetyenziswa kwenkqubo yebala kunye ne-glaze ekhethiweyo yesicelo kunye neeparamitha zokudubula.
I-PREV: OKUFUNEKA Ukwazi NgokuSintering
OKULANDELAYO : I-Zirconia- uluhlu lweengcebiso malunga neelebhu zamazinyo
Umsebenzi weVsmile wamazinyo
I-Vsmile Milling Burs VHF ® K1 K3 K4 iyahambelana